Izindlu zaseShumbuk One BHK Apartment, Gangtok
Ukufika kwindawo yam- Njengoko usuka eSiliguri, yehla eTadong, eGairigaon, eGangtok. Uya kufumana indlela ekhokelela ngasekhohlo ukusuka kuhola wendlela ojikayo. Indlela ibizwa ngokuba yiArmy Canteen Road. Thatha indlela ukuya kwindawo. Kukho ibhodi yemiqondiso ngaphandle ethi "Shumbuk Homes" yindawo oya kuyo.
I-Apartment-Njengoko ungena, uya kufumana isicwangciso somgangatho ovulekileyo wegumbi lokuhlala kunye nekhitshi. Kukho ifanitshala ebekwe kakuhle enesofa, itafile yekofu, itafile yokutyela kunye nekhitshi onokuthi ulibone kwindawo yokuhlala. Ikhitshi inazo zonke izixhobo eziyimfuneko ozidingayo. Inefriji, iimicrowaves, izixhobo, isitovu segesi, isilinda kunye netshimini. Inamagumbi okulala amathathu. Kukho igumbi elinye lokulala elinebhedi ephindwe kabini, i-sofa, iTV, itafile yekofu, iitafile ezisecaleni, i-wardrobe kunye negumbi lokuhlambela elincanyathiselwe. Amagumbi okuhlambela anesitya sokuhlambela, i-commode kunye nendawo yeshawari enegiza.